तपाइको सृजना हाम्रो आवाज (भाग -२१) - Enepalese.com
तपाइको सृजना हाम्रो आवाज (भाग -२१)
इनेप्लिज २०७२ मंसिर २८ गते १९:१४ मा प्रकाशित
भेष बदलेर दरबार छिर्ने जोगी जलाउनु पर्छ !
करोडौं नेपालीहरू रूवाउने मोदि जलाउनु पर्छ……… !!
यस्तै यस्तै देश प्रेमले ओतप्रोत सिर्जनाहरूको साथमा हप्ता भरिका साहित्यिक/सांस्कृतिक/सांगितिक समाचारहरू ”तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज भाग-21” भिडियो कार्यक्रम ! नेपाली इतिहासमै एक पृथक साप्ताहिक साहित्यिक पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम । ‘तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज’मा साहित्यिक/सांस्कृतिक/सांगितिक हप्ता भरीका समाचारहरूको साथमा विभिन्न सर्जकका सिर्जनाहरू वाचन गरिन्छ ।
यो कार्यक्रम प्रत्येक आइतबार अमेरिकाबाट प्रसारण गरिदै आएको छ।